Hiran State - News: HS:- Magaalada B/weyne oo maanta lagu soo afjaray colaad mudo u dhaxeysay beelo walaalo ah
HS:- Magaalada B/weyne oo maanta lagu soo afjaray colaad mudo u dhaxeysay beelo walaalo ah
HS:- Magaalada B/weyne waxaa dhawaanahan ka socday kulamo iyo shirar lagu dhameynayo colaadaha soo noqnoqday ee badanaa ka dhax dhaca beelaha walaalaha ah ee gobolka Hiiraan. hadaba iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa moodaa in aysanba dadku iyagu is necbeyn laakinse ay mararka qarkood soo kala dhex gasho muran dhinaca daaqa ah iyo waliba dhul beereedka amaba mararka qarkood aano qabiil iyo wax la mid ah.
Tan iyo markii ay dhawaan gaareen magaalada B/weyne Ugaasyo uu ugu horeyo Ugaas C/raxmaan Ugaas Khalif iyo inta badan nabadoonada iyo odoyaasha golaha dhaqanka Hiiraan ayaa waxaa socday shirar u badan dib u heshiisiin halka kuwo kalena ay wali dhiman yahiin.
Ha yeeshee munasabad balaran oo manta ka dhacaday magaalada B/weyne ayaa waxaa ka soo qeyb galay odayaal, waxgarad, aqoonyahano,dhalinyaro iyo waliba haween kuwooda ay ku weyn tahay qiimaha ay nabadu leetahay
Munasabada oo socotay waqti dheer ayaa waxaa qudbado kala duwan ka jeediyay dubabka dhaqanka gobolka Hiiraan sida Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif iyo dubab kale oo caan ka ah Gobolka Hiiraan.
Odayashii iyo indheergaradkii ka qeyb galay munasabadan lagu lagu soo afjarayey colaada laba belood oo walaala ah ayey odayaashii ka hadlay waxey ku dheraadeen faa'idada ay nabadu u leetahay bulshada iyo dib u dhaca ay bulshadu kala kulmaan shacabka guud ahaan gaar ahaan kuwa Hiiraan.Waxaana labada dhinac ee heshiiska gaaray laga codsaday iney ilaaliyaan deris wanaaga iyo wada noolaanshaha.
Gababa Gabadii munasabada ayaa waxaa ka hadlay Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif oo aad ugu mahad celiyay intii kasoo shaqeysay in laxaliyo colaadaan isagoona si gooyni ah uga codsaday in ay isgacan qaadaan labadii oday amaba nabadoon ee kala hogaamineysay labada dhinac. Ugaaska ayaa ugu danbeyntii ugu baqay bulshada Hiiraan iney qaataan nabada.
Xiisada maanta laxaliyay oon waqti badan oo la xaliyo iyo jaanis lagu wado hadlo loo helin mudo lix sano ku dhawaad ah ayey waxey guul weyn u tahay dhinacyadii maanta heshiiyey iyo waliba guud ahaan bulshada Hiiraan.
Dadaaladan nabadeed ee ay hormuudka ka yahiin cuqaasha Hiiraan oo gaashanaya hogaanka dhaqanka ayaa lagu wadaa iney sii socon doonaan inta dhamaan laga soo afjarayo is fahmi waaga ka dhax taagan shacabka Hiiraan si ay caruurta iyo dadka waayeelka amaba dadka dan yarta ah u helaan nolol degan oo ay ku maareyaan nolol maalmeedkooda, maadaama aysan xamili karin colaad joogto ah.
· admin on June 18 2013 17:23:26 · 0 Comments · 2804 Reads ·
14,638,235 unique visits